abaculi bafuna imvume kosopolitiki abasebenzisa izingoma zabo ngesikhathi semikhankaso yezepolitiki - iTELE RELAY
Abaculi bomculo e-United States bathi ukudonswa ngokungafanele kwezepolitiki ngemihlangano kungayekisa amanani abo, kuyilapho kudumaza futhi kuhlukanisa abalandeli… ngezindleko zomnotho.
Yize imiqhudelwano yezepolitiki ihlala isebenzisa umculo ukujabulisa izixuku isikhathi sokukhuluma, lo mkhuba awuzange uzuze abaculi okwenziwe umculo wabo.
Ngaphandle kwabaculi abahlelelwe umhlangano, abanye badlala umculo wabo ngakwizikhulisilwazi, imvamisa ngaphandle kolwazi lwabo, banikeze umbono wokuthi bayameseka iqembu lezepolitiki noma umuntu olwela isikhundla.
Ngakho-ke thanda uMick Jagger, Lorde, Sia noBlondie, uRihanna, u-Adele, ama-Rolling Stones, u-P anic! E-Disco and The Estate of the Late Prince baphakathi kwabaculi abacela osopolitiki baseMelika ukuthi bacele imvume ngaphambi kokudlala izingoma zabo emihlanganweni yomhlangano, uma kungenjalo bazothathelwa izinyathelo zomthetho.
Bephakathi kwabaculi abangaphezu kwama-50 abasayine incwadi evulekile ebiza imithetho emisha ngokusetshenziswa komculo wabo.
Ngobuchwepheshe, imithetho ye-copyright yase-U.S. Inika osopolitiki i-carte blanche (inkululeko ephelele) ukuthi basebenzise umculo orekhodiwe emihlanganweni yabo - inqobo nje lapho indawo inelayisense lokusebenza lomphakathi olunikezwe yinhlangano kasoseshini ababhali bezingoma ezifana ne-ASCAP noma i-BMI.
Le ndatshana iqale ukuvela ku: https:
Nasi isizathu sangempela sokuvakasha kuka-Emma Lohoues esifundeni se-Abidjan